ခေတ်နဲ့မကိုက်ညီတော့သော အရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်များ - Sales Training Programs by Charisma
ခေတ်နဲ့မကိုက်ညီတော့သော အရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်များ
အရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ၊ နည်းဗျူဟာတွေသည် ဒီနေ့ခေတ်လို ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာခေတ်မစားခင်ကာလ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု၊သုံးခုကျော်လောက်ကတည်းက စာအုပ်နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
Facebook, LinkedIn စတဲ့ လူမှုကွန်ရက်ဆိုဒ်တွေဝင်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း တချိုံ့တွေရေးနေ/ပြောနေကြတဲ့ အရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်များဟာ ဟိုးအရင် ၁၉၉၀ကျော်လောက်က ရုပ်ရှင်တွေဆီက အတွေးအခေါ်တွေဟာ ယနေ့အထိ စိမ့်ဝင်ပျံ့နေတာတွေ့ရမယ်။
ဒီအထဲကမှ အရောင်းသမားတော်တော်များများလည်း လက်ရှိအချိန်ထိ လက်ခံထားကြပေမယ့် ခေတ်မမှီတော့တဲ့ အကြံဉာဏ်၄ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အရောင်းသမားတွေကြားမှာ သြဇာကြီးလှတဲ့ ABC လို့လည်း အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ always be closing ဟာ ၁၉၉၂ခုနှစ်လောက်က Alec Baldwin သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အိမ်ခြံမြေအရောင်းသမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ sales trainer အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Glengarry Glen Ross ရုပ်ရှင်ထဲကပါ။ သူ့ခေတ်သူ့အခါ အင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အရောင်းသမားတွေနဲ့ stock ရှယ်ယာအရောင်းသမားတွေကြားမှာ သိပ်ကိုနာမည်ကြီးခေတ်စားခဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယာတစ်ခုပါပဲ။ အရောင်းသမားအားလုံးရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ close လုပ်ပြီး ABC ဖြစ်ချင်ကြပေမယ့် ကိုယ်လိုက်တဲ့ prospect (ဖောက်သည်လောင်း) တိုင်းကိုရတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အများစုကိုရရင် အောင်မြင်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ ဒါဆို ABC ဟာ ဘာလို့ ခေတ်မမှီတော့တာလဲ? ABC ဟာ အရောင်းသမားကို ဖိအားပေးသလို ဝယ်သူကိုလည်း ဖိအားပေးတဲ့ ပုံစံပါ။ ၂၁ရာစုမှာ အရောင်းနည်းဗျူဟာတွေလည်း ပြောင်းလဲလာကြသလို အင်တာနက်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် လူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ ပုံစံလည်း ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ ဒီဖက်ခေတ်မှာ ဝယ်သူတွေက ဖိအားပေးပြီးဝယ်ခိုင်းတက်တဲ့ အရောင်းသမားများကို ဖယ်ခွာလာကြပါပြီ။ အရောင်းသမားတိုင်းဟာ ဇွဲနပဲနှင့် အလုပ်ကြိုးစားကြရမှာမှန်ပေမယ့် ဖောက်သည်ကို ဖိအားမပေး၊ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီး ပြဿနာများကိုကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ရောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ ABC ဟာ ခေတ်မမှီတော့ပါဘူး။
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင် စကားစပြောတဲ့သူက ရှုံးတယ်ပေါ့။ ဆိုလိုရင်းကတော့ နဲနဲပြော များများနားထောင်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မလားပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထူးချွန်တဲ့ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ မိမိက ခရားရေလွှတ်ပြောဆိုနေခြင်းထက် ဖောက်သည်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုသိပြီး ကူညီနိုင်ဖို့ များများနားထောင်ပေးရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပြောဖို့လိုအပ်တယ်။ ပမာပြောရရင် ဈေးနှုန်းအားဖြင့်သော်၎င်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သော်၎င်း စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဖောက်သည်လိုချင်တာနဲ့ ကိုယ်ပေးနိုင်တာကို သဲသဲကွဲကွဲဖြစ်စေဖို့ ပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက် ဘာလဲသိအောင် မေးခွန်းလေးတွေမေးခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်ချက်ကိုသိနိုင်လို့ “စကားစပြောတဲ့သူက အရှုံး” ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ မမှန်တော့ပါဘူး။
ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ တန်ဖိုးကို ဖောက်သည်သိအောင်လုပ်နိုင်ရင် ဈေးနှုန်းက အရေးမကြီးဘူး!
ဒီအဆိုက ရာနှုန်းပြည့်မှားတယ်လို့ မပြောနိုင်သလို မှန်တယ်လို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ လိုချင်တောင့်တတဲ့ အရာတွေရှိတယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေပေါ့။ ဥပမာတစ်ခုပေးရရင် လူတိုင်းကတော့ Rolls-Royce ကားရဲ့ ကြီးမြတ်မှုကို သိကြတာပဲ ဒါပေမယ့် လူတိုင်း ဝယ်မစီးနိုင်ကြဘူးလေ။ ထို့အတူပဲ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကုန်ပစ္စည်းက ဖောက်သည်တွေအတွက် လက်လှမ်းမမှီတဲ့ အနေအထားမှာရှိနေရဲ့လား ဘာညာကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ သုံးသပ်ရမယ့်အပြင် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ target market နဲ့လည်း ဆိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှတော့ Toyota ကားကို Rolls-Royce ကား ဈေးနှုန်းတော့ ပေးဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။
မွေးရာပါ ပါရမီလာတဲ့ အရောင်းသမား
ဒါကတော့ ရာနှုန်းပြည့် မှားနေတယ်လို့ ရဲရဲကြီးပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြောကောင်းသူတွေကို marketing ကောင်းတယ်၊ ဈေးရောင်းကောင်းတယ်ဘာညာ ချီးမွမ်းကြပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတေ့ာ တော်ကီကောင်းရုံအရည်အချင်းလောက်နဲ့ အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ တပ်သိလိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ပရိယာယ်တွေ၊ ပညာတွေ၊ နည်းဗျူဟာတွေ အကုန်လုံးသည် ဖြစ်ချင်သူတိုင်း လေ့ကျင့်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဆိုဟာလည်း မှားနေတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..။